Kuus oo ka Soo Laabtay Addis Ababa – Rasaasa News
Kuus oo ka Soo Laabtay Addis Ababa
Jijig, May 8, 2014 – Kuus oo kol dhaw loo magacaabay kaalinhayaha xarunta xisbiga Jijiga, ayaa kulmiyey arday Somalida ee ku jira kuliyadaha Addis Ababa. Mudane Kuus, oo maanta ku soo laabtay Jijiga, safar shaqo oos ku tagay Addis Ababa.
Mudane Kuus oo ka jawaabaya kacdoon ka socda kuliyadaha, ayaa kala hadlaya ardayda Somalida in ayna ka qaybgalin fadqalalada ay wadaan ardayda kuliyadaha.
Mudane Cabdi Kuus, ayaa ku booriyey ardayda Somalida in ay ka fogaadaan, wax kasta oo ku lid ah dawlada Atoobiya. Waxaana uu ka codsaday in ay ku biiraan xisbiga Somalida ee kaligii ka jira degaanka Somalida [XSHSI].
Olole balaadhan oo ay dawladu ku kala fiijinayso kacdoonka ardayda, ayaa ka socda Atoobiya, waxaana xarumaha tacliinta sare ee dalka Atoobiya la dajiyey ciidan federaal ah oo la socda dhaqdhaqaaqa ardayda kuliyadaha.
Masuuliyiin ka socda degaanada, ayaa kala hadlaya ardayda degaanada ee wax ka barta kuliyadaha Addis Ababa in ayna samayn wax rabashado ah.
Kuliyada Jijiga oo ardayda dhigata ay 70% yihiin arday Oromo ah, ayaa sameeyey abaabul banbax ah, kaas oo kolkiiba ay ka hortageen ciidanka federalka iyo Liyuu Booliska.
Dhamaan Kuliyadaha ayaa xidhan, waxaana la xidhay arday badan oo ay ku jiraan saddex macalin oo ka tirsan kuliyada Ambo.
Roob Khaasare Gaystay oo Xalay ka Da,ay Magaalada Qab-Dahare